AMAKHASINO E-INTHANETHI AHAMBA PHAMBILI EKENYA 2022 - OnlineCasinosOnline
Ikhaya / amakhasino e-inthanethi ahamba phambili ekenya
AMAKHASINO E-INTHANETHI AHAMBA PHAMBILI EKENYA
Sekunesikhathi eside ukugembula kukhona emhlabeni jikelele, futhi lokhu kubandakanya izwekazi laseAfrika. Ukufika kwe-inthanethi kuholele ekukhuleni okuqhumayo kwale mboni enenzunzo kuleli zwekazi, njengakwezinye izindawo emhlabeni jikelele. Ukukhula okuqhubekayo kubangelwe esinye isinyathelo sentuthuko esithathwe yimboni – inguquko yekhasino yeselula. Ukugembula ekhasino – ebhilidini, ku-inthanethi, namanje kumadivayisi eselula – sekunesikhathi eside kwenzeka eKenya.
Ngokungafani nakwamanye amazwe aseAfrika, ukugembula kusesimweni esijabulisayo eKenya. Lezi zinhlobo ezintathu zokugembula sezisemthethweni eKenya:
Amakhasino kumadivayisi eselula
Kunamakhasino asebhilidini angu-15 emadolobheni angaphezulu kuka-4 eKenya; nakuba iningi lalezi zitholakala eNairobi, inhlokodolobha iMombasa, nakwezinye izindawo eziseduze. Uthola izinhlobo ezimbili zamakhasino asebhilidini lapha: lezo eziyingxenye yendawo yokuvakasha kanye nalezo ezizimele zodwa zinegenjongo yokugembula kuphela. Nakuba amakhasino asezindaweni zokuvakasha anezivakashi eziningi zakwamanye amazwe, uthola inani elikhulu labantu bendawo kumakhasino azimele; inani lokubheja liphansi futhi kunemishini eminingi yokugembula neminye imidlalo ongayidala.
Manje kunamakhasino aku-inthanethi kanye nakumadivayisi eselula eKenya ngenxa yemithetho ethuthukisiwe lapha. Sizoxoxa kabanzi ngalokhu ezingxenyeni ezizayo kuleli khasi.
Amakhasino E-Inthanethi Ahamba Phambili eKenya Namabhonasi Awo
Okulandelayo luhlu lwamakhasino e-inthanethi ahamba phambili amukela abadlali baseKenya. Njengoba kungenzeka ukuthi uye uqaphele, kukhona amakhasino aku-inthanethi avela eKenya nakulolu uhlu, hhayi amakhasino aku-inthanethi aphethwe ngabasebenza phesheya emazweni. Sibhale amakhasino kanye namabhonasi owatholayo lapho ubhalisa nawo. Ukudlala kunoma yiyiphi kulawa makhasino, kufanele uchofoze inkinobho ethi Dlala Manje eceleni kwekhasino ebhalwe kuhlu.
UKUSEBENZISA I-ONLINECASINOSONLINE UKUTHOLA IKHASINO ENGCONO KAKHULU KUBADLALI BASEKENYA
Kunewebhusayithi elilodwa kuphela elingumthombo ongcono kakhulu ngolwazi lwamakhasino aku-inthanethi ahamba phambili kubadlali baseKenya. Akugcini lapho; sibuye sinikeze ngeminye imininingwane ehlobene nokugembula eKenya. Uthola lokhu uma uza kithi:
Uhlu lwamakhasino e-inthanethi ahamba phambili olunembile kunawo wonke kubadlali baseKenya
Ukubukeza onke amakhasino e-inthanethi ahamba phambili akuhlu lwethu
Ulwazi oluphathelene nemithetho yokugembula yaseKenya
Ulwazi olumayelana nokugembula ngamadivayisi eselula eKenya
IZIMPAWU ESIZIVIVINYA KUMAKHASINO E-INTHANETHI ASEKENYA
Sivivinya onke amakhasino aseKenya, empeleni onke amakhasino e-inthanethi amukela abadlali baseKenya, izimpawu eziningi eziningi. Lawo afika ohlwini lwethu lwamakhasino e-inthanethi ahamba phambili eKenya yiwona akwazile ukuthola amaphuzu aphezulu kuzo zonke noma okungenani iningi lezimpawu esizihlolayo. Izimpawu ezehlukene esizihlolayo yilezi:
Ukubukeka nokusebenziseka: Onke amakhasino asohlwini lwethu eza nezikrini ezinhle kakhulu eziqinisekisa ukuzulazula okubushelelezi nokufinyelela okulula kuzici ezahlukahlukene abadlali abaziicingayo – imidlalo, amabhonasi, ama-jackpots uma ekhona, izindlela zokukhokhelwa, kanye nokunye.
Isofthiwe: Onke amakhasino abhalwe kuwebhusayithi yethu asebenzisa isofthiwe evela ezinkampani ezinhle kakhulu embonini.
Imidlalo: Sihlola ikhasino ngalinye ngemidlalo eliyinikezayo. Lawo afika ohlwini lwethu anemidlalo emihle kakhulu ongayikhetha – izinhlobo ezahlukahlukene zemishini yokugembula, imidlalo yetafula, imidlalo yamakhadi, i-poker yevidiyo, nemidlalo ekhethekile efana namakhadi owaqhwayayo kanye ne-Keno; eminye inezizumbulu zemali ongayiwina..
Ama-Jackpots: Izizumbulu zemali zinothisa futhi zithuthukise isipiliyoni sokudlala ekhasino eku-inthanethi. Onke amakhasino waseKenya asohlwini lwethu anikeza ama-jackpots akhulayo ongazama ukuwina..
Amaphromoshini namaBhonasi: Sivivinya onke amakhasino amukela abadlali baseKenya ngamaphromoshini namabhonasi abawanikezayo. Angcono kakhulu afika ohlwini lwethu. Chofoza kunoma yimaphi amakhasino lapha futhi uqinisekisiwe hhayi nje ibhonasi elihle lokukwamukela kodwa futhi namanye amabhonasi ongawasebenzisa uma usuliqedile ibhonasi lakho lokukwamukela.
Ukusebenza Kwemali Yakuleli: Sivivinya amakhasino ahlukene esihlangana nawo ngemali abayesekayo. Asohlwini lwethu asekela i-Kenyan Shilling, okuyimali yakuleli.
Izindlela Zokukhokhelwa: Onke amakhasino esiwafaka kusayithi lethu anikeza ngezindlela eziningi zokukhokha. Lokhu kwenza kube lula kuwe ukuthi udiphozithe futhi uphinde ukhiphe imali uma udlala kunoma yiyiphi kulawa makhasino.
Ukuphepha: Ukuphepha kuyinto ekhathaza kakhulu phakathi kwabadlali emhlabeni jikelele. Onke amakhasino akule sayithi ahlolwe kanzima ngamazinga awo okuphepha. Ikhasino ngalinye lisebenzisa ubuchwepheshe bokuphepha obujwayelekile bemboni njenge-128bit encryption socket layer (SSL) encryption digital nama-firewalls.
Usizo Lwamakhasimende: Onke amakhasino asohlwini lwethu ahlolwe kahle ngokuxhaswa kwamakhasimende awo. Ikhasino ngalinye lineqembu labantu elisiza amakhasimende ongaxhumana nalo ngezindlela eziningi – ingxoxo ebukhoma, ucingo, ne-imeyili.
Amakhasino Eselula: Sihlola onke amakhasino ngokutholakala kwekhasino ye-divayisi yeselula. Lawo asohlwini lwethu eza namakhasino awo eselula. Ikhasino yeselula ngalinye lisebenza nge-Android ne-iOS futhi litholakala linemodi lokudlala ngokshesha; amanye anama-app awo futhi.
Izinhlobo Zokugembula eKenya
Izinhlobo eziyinhloko zokugembula ozibona eKenya, njengamanye amazwe amaningi ase-Afrika, yilezi:
Uhlobo lokugembula olwatholakala kuqala kwakuyikhasino elisebhilidhini futhi kwakukhona amabhuku okubheja ezemidlalo kanye nezitolo zokubheja. Amakhasino e-inthanethi eza ngokulandelayo; ekuqaleni bekungekho amakhasino e-inthanethi avela eKenya ngenxa yemithetho yokugembula engaqondakali. Kodwa, ukubukezwa kabusha kwe-Betting, Lottery, and Gambling Act of Kenya ngo-2012 kwavula indlela yokuvela kwamakhasino e-inthanethi akuleli. Manje awudingi ukuthi udlale emakhasino aphethwe ngabasebenza phesheya kwezilwandle kuphela.
UMTHETHO WOKUGEMBULA EKENYA – EZINSUKWINI ZAKUQALA
IKenya ibikade ingcono kunamanye amazwe amaningi aseAfrika uma kuziwa ekugembuleni ngenxa yokuba khona kwemithetho elawula zonke izinhlobo zokugembula ezweni. Umthetho wokuqala wokulawula ukugembula ezweni wabekwa ngo-1966; kulapho-ke kwamiswa umthetho we-Betting, Lottery, and Gambling Act of Kenya. Ukumiswa kwalo mthetho kuholele ekwakhiweni kwe-Betting Control and Licensing Board of Kenya, okuyinhlangano elawula zonke izinhlobo zokugembula ezweni.
Umthetho we-Betting, Lotteries, and Gambling Act wabukezwa ngo-2012 futhi kwaba nezinqumo ezathathwayo ukubandakanya ukugembula ku-inthanethi, okuholele ekusungulweni kwamakhasino e-inthanethi aphuma eKenya. Umthetho othuthukisiwe ubhalise ngokusemthethweni lezi zinhlobo zokugembula ezilandelayo
Amakhasino e-inthanethi – Ikhasino ye-inthanethi likahulumeni namanye amakhasino aphethwe yizakhamuzi
Ama-lotto amabili aphathwa uhulumeni – Ungangena kulawa makhasino e-inthanethi ngeselula yakho
Lokhu kusho ukuthi manje akudingeki ukuthi abadlali badlale kumakhasino aphesheya kwezilwandle kuphela; banamakhasino e-inthanethi aseKenya abangakhetha kuwo.
AMAKHASINO E-INTHANETHI EKENYA
Ngenxa yokubukezwa kwemithetho yokugembula ekhona, ukugembula kumamakhasino e-inthanethi sekusemthethweni eKenya. Wonke amakhasino e-inthanethi ezweni anikezwe ilayisense yi- Betting Control and Licensing Board. Ikhasino ye-inthanethi lokuqala elatholakala kubadlali lapha bekuyi-BetKenya. Lena ikhasino ye-inthanethi ephethwe nguhulumeni eyethulwe ngo-2013. Imidlalo etholakala lapha ibandakanya imishini yokugembula, imidlalo yetafula neyamakhadi, ne-poker yevidiyo.
Kukhona namanye amakhasino e-inthanethi futhi, alawulwayo kanye nangalawulwa, lapho abadlali bathola ukufinyelela uhlu lwemidlalo othokozisayo kanye nesipiliyoni semidlalo esezingeni eliphakeme. Lezi ezisohlwini lwethu nazo zinama-jackpots akhulayo.
AMAKHASINO AMADIVAYISI ESELULA EKENYA
Ngokukhula kokuthandwa kweselula, isinyathelo sentuthuko semboni yekhasino ye-inthanethi kwakuwukugembula kwamakhasino eselula. I-Afrika namuhla ingelinye lezimakethe ezikhula ngesivinini esikhulu samadivayisi eselula – ama-smartphones nama-tablets – kanye nokusetshenziswa kwe-broadband yeselula. Izinombolo kule minyaka embalwa edlule ziyazikhulumela:
Isibikezelo bekuwukuthi i-Afrika izokweqa nge-43% ekubhalisweni kwe-broadband yamaselula ekupheleni kuka-2014 (ngokocwaningo oolwenziwe yi-International Telecommunications Union)
Inani labasebenzisi be-broadband yeselula e-Afrika leqa lisuka ku-2% ngo-2010 laya ku-19% ngo-2014
Lezi zinombolo yingakho nje ubona ukukhula okuqhumayo kumakhasino e-inthanethi lapha. Lokhu kunjalo ikakhulukazi ngeKenya. Laba abalandelayo abahlinzeki abakhulu bamanethiwekhi eselula eKenya:
Njengoba isibalo sababhalisiwe eKenya simi kubabhalisi abangaphezulu kwezigidi ezingu-30 imakethe lilungele ukwanda kwenani labasebenzisi be-smartphone abane-Inthanethi. Lokhu kusho ukwanda okungenzeka kwesibalo sabalandeli bekhasino yeselula ezweni. Abahlinzeki bamanethiwethi abaqanjwe ngenhla bavumela ukuthi abadlali baseKenya baxhumame nekhasino ye-selula uma benokulandelayo:
I-smartphone noma i-tablet
Inethiwekhi ye-3G noma 4G; enye indlela yi-Wi-Fi
Abadlali bangafaka imali ku-akhawunti yabo yekhasino besebenzisa iselula yabo besebenzisa noma iyiphi yalezi zindlela zokukhokha ezilandelayo:
Ngabe kufanele ngikhathazeke ngokuphepha lapho ngibhalisa ekhasino ye-inthanethi yaseKenya?
Into eyodwa engadingeki ukuthi ukhathazeke ngayo ekhasino ye-inthanethi yaseKenya ukuphepha; bonke basebenzisa ubuchwepheshe bokufihla okujwayelekile embonini. Lokho kuyiqiniso ikakhulukazi kuwo wonke amakhasino aphezulu esiwafaka ohlwini lwethu kusayithi lethu lapha.
Zingaki izindlela zokudlala engizitholayo lapho ngibhalisa ekhasino ye-inthanethi yaseKenya?
Cishe wonke amakhasino e-inthanethi aseKenya ayatholakala kumodi yokudlala nokushesha. Amanye awo anikela ngemodi yokudawuniloda, ekuvumela ukuthi udawunilode isofthiwe kukhompyutha yakho. Kwamanye amakhasino ungathola imodi yokudawuniloda kuphela.
Ngingadlala mahhala ekhasino yaseKenya online?
Yebo! Ukubhaliswa kumahhala kuwo wonke amakhasino e-inthanethi ahamba phambili kubadlali baseKenya. Futhi ungadlala kulawa makhasino mahhala, lapho ukhetha ukusebenzisa imodi yokuzijwayeza. Imodi yemali yangempela iyatholakala kuwo wonke lawa makhasino.
Kungenzeka ukuthi udiphozithe ama-Kenya Shilling (KES) lapho udlala ekhasino ye-inthanethi laseKenya?
Iningi lamakhasino e-inthanethi aseKenya kanye neningi aqhutshwa ngabasebenza phesheya kwezilwandle amukela izinkokhelo nge-Kenya Shillings (KES). Lawo asohlwini lwethu amukela inkokhelo ngemali yakuleli.
Ngingayidlala imidlalo yamakhasino engiyithandayo ngedivayisi yami yeselula kunoma yimaphi amakhasino e-inthanethi aseKenya?
Amakhasino e-inthanethi amaningi aseKenya futhi neningi aqhutshwa ngabasebenza phesheya kwezilwandle amukela abadlali baseKenya banenguqulo yeselula yekhasino ekuvumela ukuthi udlale imidlalo yakho oyithandayo yekhasino nge-kuselula yakho.